Metrobus Stops Map: Ị nwere ike ịhụ na Metrobus niile na-akwụsị n'otu map ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta nke kachasị nso na ebe ị chọrọ ịga na ebe dị anya na ebe ị na-aga site na nkwụsị nke metrobus, ị nwere ike ịkekọrịta ozi ebe ịkwụsị na ndị enyi gị. Metrobus kwụsịrị [More ...]
Ekrem Imamoglu, onye isi obodo nke Obodo isi obodo Istanbul, gara Kabatas-Mecidiyekoy-Mahmutbey Metro taa. Imamoglu, n'etiti ogo nke njem ahụ, a na-enyocha owuwu ụzọ ụgbọ oloko ma na-elekọta ma na-ahụ maka etiti ụgbọ ahụ. Mgbe sochiri ọrụ ndị ahụ na saịtị ahụ [More ...]
Ihe ọghọm Metrobus na Uskudar! 10 merụrụ ahụ
Ihe ọghọm Metrobus na Uskudar! 10 merụrụ ahụ. Otu metrobus dara n'ihu nnukwu obodo na ọdụ ụgbọ ala Burhaniye na Üsküdar, Istanbul. Dika ozi nwetara, metrobus sitere na Söğütlüçeşme rue 10 July Martyrs Bridge, [More ...]
Ịmara ọrụ nke IETT ọkwọ ụgbọala?
Ọrụ-Is Union, ndị ọkwọ ụgbọala IETT kwuru na nghọta nke ọrụ ahụ kwuru, sị, "arụmọrụ na-eme ka ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọala adịghị emepụta ma ọ bụ mepụta nghọta abụghị omume." Elere. N'okwu ederede site n'otu, CHP Istanbul Deputy [More ...]
Metrobus Mberede na Mecidiyekoy, Istanbul
A na-aga ebe dị n'etiti Mecidiyeköy na Zincirlikuyu kwụsịrị na Istanbul. Na mberede ahụ, ndị 1 merụrụ ahụ, gụnyere ndị njem 2 na ụkwụ na metrobus. Ụgbọ njem Metrobus kwụsịrị ruo oge ụfọdụ. Ihe mberede ahụ mere n'oge awa n'etiti 23.15 Mecidiyeköy-Zincirlikuyu akwụsị [More ...]
Ihe ndị echefuworo na bọs IETT site na ndị njem 2 July 2019 ga-emepụta na Tuesday site na njedebe. Ngwa na bọs IETT 2 July 2019 Na Tuesday na 09.00-12.00 na ụlọ ahịa na Karaköy Station Building [More ...]
Obodo nke Zeytinburnu, ụmụ amaala ndị na-apụghị iru iftara, CevizliUbi vaịn ahụ na-arụ ọrụ na-ekpo ọkụ dị na Metrobus. Ụmụ amaala nke meghere ngwa ngwa na ebe a na-eji efere, kwupụtara na ha nwere afọ ojuju maka ngwa ahụ. RAMADAN NA-AHỤ N'ỌZỌ N'OGE NDỊ 5 n'ógbè ahụ [More ...]
Ulo Kaadị Kaadị Blue Ụmụaka na Istanbul Na-abịa na 40 TL
Nzukọ IBB, òtù AK Party nabatara nkwenye ahụ site na ịnakwere mmiri n'ime ụlọ yana 46 10'ya XNUMX'ya kwadoro ịbelata ọrụ. A na-ebulikwa mmụba nke ọnwa na mmiri. Ọzọ na atụmatụ nke AK Party Group [More ...]
Ọganihu Flash nke Egwuregwu Na-asọ oyi na Metrobust!
Metrobüsl dinta nsogbu n'obi nwoke guzo n'akụkụ a nwaanyị aga na ntụziaka nke oche ya na-etinye akpa na nwoke ahụ n'onwe ya Ars. ewere na ndị ọnọdụ mere site mmadụ jupụtara metrobus ma mgbe a ka m chọpụtara na kpachaara anya na kọntaktị [More ...]
Metrobuses si Netherlands
Na oge nke onye isi President Kadir Topbaş site na Obodo Istanbul metropolitan, ihe oyiyi nke 2008 ụgbọ si na Netherlands gosipụtara. A na-eburu Buses, nke a na - ewega na Euro 50 nde Euro ma malite ịmalite ịrụ ọrụ mgbe otu afọ gasị, na-echere na ụgbọ mmiri Edirnekapı na Hasanpaşa. si na-egbuke egbuke [More ...]
44 stop overpass esịnede Istanbul nke Metrobus akara na-ejikọ ndị abụọ n'akụkụ nke ụzọ ahụ, 12 afọ mgbe oghere a mere inweta maka nkwarụ ndị mmadụ. IMM ga-ejide obi maka owuwu ahụ n'April [More ...]
Buyukcekmece Metro na Metrobus Oziọma
IMM President na AK Party akwukwo Mayor Mevlüt Uysal Buyukcekmece, Büyükçekmece ma Metro ka a mara ọkwa na ha ga-ewetara ndị Metrobus. Uysal, Gebze na FebruaryHalkalı O kwukwara na President nke Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) ga-emepe Suburban Line ahụ. [More ...]
Ihu igwe na-atụ oyi, enwere ọrịa ojoo. Karịsịa, ndị ọkachamara na-akọwa ebe ndị juru ebe niile na njem ndị mmadụ. Ma ị maara na e nwere ihe ize ndụ ndị ọzọ na ụgbọala ndị dị ka metrobus? Ọkpụkpụ Specialist Assoc Ọrịa. Dr. Serdar Kalemci, ụkwara nta [More ...]
Nkwadebe maka Winter na Istanbul OK
Obodo obodo ukwu nke Istanbul mechara kwadebe ya na nsogbu nke ọnọdụ oyi. A na-ejikọta ihe mgbochi nke oyi maka IMM Disord Coordination Centre (AKOM). Onye 7 bin 83 na otu puku 357 maka oge oyi oyi [More ...]
Ụlọ ọrụ na-ebu ibu na-enweghị ntụpọ na-anọgide na-eme ka ndụ dịkwuo mfe maka ụmụ amaala nwere nkwarụ. CK Bogazici Eletrik Energy General Manager Khaled Let 13 uche na European n'akụkụ nke Istanbul enịm na ọnụ ọgụgụ nke odori ụgbọ kwadoro oche nkwagharị nke ozi ọma na-abịa afọ 25 [More ...]
Istanbul Metropolitan Municipality, ụmụ amaala ka mma ọrụ quality, belata ojiji nke onwe ụgbọala, ikwe free enyefe n'etiti bọs na ụzọ okpuru ala iji nye ndị njem ọha na eze na nyefee àgwà nke omenala ọkọnọ edoghi nwayọọ nwayọọ na-aku. free [More ...]
Mgbapu na-adịghị mma na steepụ nke Metrobus Malite Mmezi
Mmezi na rụziri mgbidi amalite November 1 nke-ezighị escalators na nchekwa ihe na Istanbul Metrobus akara. Ighazi nhazi nke IETT, nke e mebere n'oge gara aga na GCC, ka etinyere na September na nke 2 nde 265 puku pound. [More ...]
Turkey si Metrobus mkpa ka a mezurunụ na Bursa
Turkey na-aga n'ihu na-eto eto kwa afọ nke nkà na ụzụ na ubi. Ya mere, na mgbakwunye na mmepe nke mpaghara agha, anyị ga-amalite ịmalite ngwaahịa anyị na mpaghara ndị ọzọ. Turkey na-aga n'ihu na-eto eto kwa afọ nke nkà na ụzụ na ubi. nke [More ...]
Metros, Metrobuses dị ka ụgbọ elu na-arụ ọrụ
Değil Istanbul adịghị mma maka ụmụ nwanyị; Mgbe nwunye gị, ị na-iwe iwe ị na-erubere gị girl nwa naanị ebe "CHP Istanbul Metropolitan Municipality aha ikpeazụ nwere oghere mmeri na-agụnye Istanbul osote onye Gursel Tekin, mmalite nke ya mega-obodo ukwu [More ...]
Metrobus na Istanbul
Metrobus na direction n'ihi nke ọdịda nke beholder na Şükrübey akwụsị na Istanbul Beylikdüzü Metrobus mita nke ọdụ mere. Ụfọdụ ụmụ amaala na-achọghị ichere, gbadata na metrobus ma jee ije na Avclar. Dika ozi ndi natara, uzo nke Beylikdüzü Şükrübey kwụsịrị [More ...]
Usoro ihe omumu nke ohuru IMM
N'afọ a, Istanbul Metropolitan Municipality na-ebido oru ọhụrụ n'ime usoro ç Smart Urbanism "echiche. Na akwụkwọ afọ 2018-2019, ndị nne na nna ga-enwe ike ịmụta ụgwọ ọrụ, ọrụ na ịkwọ ụgbọala na ịntanetị. 17.09.2018: 06 na 00, ụbọchị e meghere ụlọ akwụkwọ [More ...]
Na Na Istanbul Na Na Na Na Na Na Na Na Na Istanbul
Obodo Istanbul Metropolitan na-abanye aka oru ohuru iji gbochie mmetọ gburugburu ebe obibi. Istanbul ga-agwụcha site na ijuputa PET bottles n'ime akpaaka. Ọ ga-akwado mgbanwe nke ọrụ akbil a ka ọtụtụ chakoo ụmụ anụmanụ jupụtara iji chebaa ókè. [More ...]
Ejiri 50 kwuo na ụbọchị njem na Istanbul
Istanbul Metropolitan Municipality Council, dịka na ememe ndị gara aga, ụgbọ njem ndị ọzọ na-ebugharị ụgbọ ala ọha na eze na ụgbọ ala ndị a kpebiri ime ntinye ego nke 50. Dị ka nke a, ụmụ amaala, 21-24 August nọ n'oge Ememme Àjà [More ...]
Metrobus Expeditions Na Asphalt Studies Na Haliç Bridge
Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Road Mmezi na Infrastructure Services Department crews Golden Horn Bridge Metrobus abalị abụọ korota ụzọ ntaghari ohuru ga-arụ ọrụ. A ga-esi na mmiri dị n'akụkụ okporo ụzọ nke Edirnekapı-Kadıköy. Ya mere, n'oge ọmụmụ (D-100 ụzọ [More ...]